Ogandà: Fitontonganan’ny isan’ny rajakon-tendrombohitra? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2018 6:17 GMT
Nihevitra isika fa mbola nisy teo amin'ny 700 teo ireo rajakon-tendrombohitra miaina malalaka amin'izao fotoana izao – izay ny 336 any Ogandà avokoa – fa milaza ny fanadihadiana vaovao navoaka tao amin'ny gazetiboky New Scientist fa toa be fanantenana loatra izany (amin'ny teny anglisy, toy ireo rohy rehetra manaraka).
Tamin'ny fampiasana fomba fanisana ny trano amboarin'ireo rajako mihaminkamina ireo isankalina no nanisàna ireo biby 336 heverintsika fa miaina ao amin'ny Valan-javaboaharim-Pirenena tsy azo idirana ao Bwindi ireo. Ankehitriny, milaza ilay fanadihadiana vaovao fa toa nanambony loatra ny isan'ny biby ao amin'ity vondrona ity ilay fomba fanisàna satria manamboatra trano mihoatra ny iray isankalina ireo rajako.
Milaza mikasika ity tatitra ity i Paula Kahumbu , izay manoratra ao amin'ny blaogy Gorilla Protection:
Vao haingana, fitiliana ADN avy amin'ny tain-drorohany no nataon'i Katerina Guschanski avy ao amin'ny Ivontoerana Max Planck momba ny Haiolombelon'ny Fivoarana ao Leipzig, ao Alemaina,… manambara fa vitsy kokoa raha ny marina ny isan'ny rajakon-tendrombohitra. Fehezana fototarazo 302 miavaka an'ireo rajako tsirairay no hitany, milaza fa manambony loatra ny isan'izy ireo ny fomba fanisana ny tranony, satria manamboatra mihoatra ny trano iray ny rajako sasany.
Nanombana ny isany ho 340 ny fandalinana ADN taloha – tamin'ny 2007. Izay mampiseho fa nihena 10% ny isany ao Bwindi. Mitandrina anefa ireo siantifika ary mbola tsy vonona ny hanambara hoe mitontongana ny isan'ireo mponina ireo, na hoe mitoboka.
Tena vaovao ratsy izany raha tena nihena marina ny isan'ny mponina ao Bwindi. Manoratra i Paula:
Raha tena mihena marina ny isan'ny mponina (rajako) ao Bwindi, tena vaovao ratsy be ho an'ireo rajakon-tendrombohitra izany – heverina fa 700 eo noho eo sisa no tafajanona, manambara fihenana, farafahakeliny 5%n-n'ny isan'ny mponina ankapobeny izany asa izany.
Etsy andaniny, lasa 10 sisa taorian'ny lahatsoratra farany nosoratanay tamin'ny 11 sy 14 janoary ny tombana tra-boina [olombelona] tamin'ilay fanafihana tamin'ny 2 janoary nataon'ny Tafi-Panoheran'ny Tompo (LRA) tao amin'ny Valan-javaboaharim-Pirenena tao Garamba. Olona telo no mbola tsy hita hatramin'izao toy ny nambaran'ny blaogy Baraza. Efa fantatra koa ireo niharam-boina, ary manome ny lisitra fenon'ireo maty, naratra ary tsy hita popoka ity lahatsoratra manokana an'i Barazai ity.
Maneho hevitra momba ny fisamborana an'i Laurent Nkunda, ilay jeneraly ratsy saina ary kongoley lehiben'ny mpikomy, nataon'ny tafika roandey ihany koa ny blaogy Gorilla Protection, nambaran'ny BBC, izay toa vaovao tsara ho an'ny tsirairay, olombelona na rajako.